Bit By Bit - su'aalo Waydiinta - 3.5.1 qiimaynta daqiiqad nolaato
Cilmi-jaraan kartaa sahan weyn iyo iyaga kula saydhaa galay nolosha dadka.
Qiimaynta daqiiqad nolaato (EMA) lug ku sahan dhaqanka, iyaga jaray ilaa googooyo, iyo iyaga rusheeyo galay nolosha ka qaybgalayaasha. Sidaas darteed, su'aalaha sahanka lagu weydiin kartaa wakhti ku haboon oo meel, halkii ay todobaadyo waraysi dheer ka dib dhacdooyinka ka dhacay.
EMA waxaa lagu gartaa afar muuqaalada: (1) ururinta xogta goobaha nolosha dhabta ah, (2) qiimeynta in ay diiradda saaraan gobolada hadda ama aad u danbeeyay shaqsiyaadka 'ama dabeecadaha; (3) qiimeynta laga yaabo in ay dhacdo ku salaysan, waqti ku salaysan, ama aan kala sooc lahayn keentay (ku xiran tahay su'aasha cilmi); iyo (4) dhamaystirka qiimaynta badan muddo (Stone and Shiffman 1994) . EMA waa hab ay ku weydiinaya in waxa si wayn u fududeeyay telefoonada smart in dadka la falgalaan si joogto ah maalintii oo dhan. Dheeraad ah, maxaa yeelay, telefoonada smart Axmaduu dareemayaal-sida GPS iyo accelerometers-waa sii kordhaysa suurto gal ah in ay kiciyaan oo cabbirka ku salaysan waxqabad. Tusaale ahaan, phone a smart la qorsheeyay laga yaabaa in ay kiciyaan su'aal baadhitaan haddii jawaab a galaa xaafad gaar ah.
yabooha EMA waxaa xunna lagu muujiyey by cilmi PhD-Nimco Sugie ah. Tan iyo 1970 dalka Mareykanka ayaa u kordhay tirada dadka in ay xiraa. Sida of 2005, oo ku saabsan 500 ee 100,000 Americans kasta oo ku jiray xabsi, heerka ka mid ah Maxaabiista ka badan meel kale oo adduunka ah (Wakefield and Uggen 2010) . -kaca ee tirada dadka xabsiga galaya ayaa sidoo kale soo saaray xowli ah in tirada dadka xabsiga tago; oo ku saabsan 700,000 oo qof xabsiga ka baxdo sanad kasta (Wakefield and Uggen 2010) . Kuwani hore ee dembiilayaasha caqabado daran dul xabsiga ka tagay, iyo nasiib badan dib xabsi aakhirka. Si aad u fahamto iyo in la yareeyo recidivism, saynisyahano bulsho iyo siyaasad-dejiyeyaasha u baahan tahay si ay u fahmaan waayo-aragnimo ee hore ee dembiilayaasha sidii ay dib-u-galaan bulshada. Si kastaba ha ahaatee, xog, kuwaas oo ay adag tahay in la ururiyo oo la hababka baadhitaanka caadiga ah, maxaa yeelay hore ee dembiilayaasha u muuqdaan in ay noqon adag tahay inaad wax ka barato iyo naftooda waa mid aad u kacsan. Habab Cabbiraad in ciidamo sahan dhawr bilood kasta seegi xaddi weyn ee dhaqdhaqaaqa ee naftooda (Sugie 2016) .
Si aad u barato habka dib-u-galo ex-dembiilayaasha la sax weyn, Sugie qaaday muunad ixtimaalka caadiga ah ee 131 oo qof ka mid ah liiska dhamaystiran ee shaqsiyaadka xabsiga ka tagin Newark, New Jersey. Waxay la siiyaa ka qaybgale kasta phone a smart in noqday boosteejo ah oo xog ururinta hodan. Sugie isticmaalo telefoonada ay u maamulaan laba nooc oo sahan. First, ayay u cid dirtay ah "baadhitaan khibrad sampling" waqti aan kala sooc lahayn loo doortay u dhexeeya 9 subaxnimo iyo 6da waydiinaya ka qaybgalayaasha ku saabsan hawlaha iyo dareenka hadda ay. Second, at 7pm, ayay u cid dirtay oo ah "baadhitaan maalin kasta" waydiinaya oo ku saabsan dhammaan hawlaha maalintaas. Si wadajir ah labadan sahan siiyaan faahfaahsan, xogta gaadhya oo ku saabsan nolosha ka mid ah hore ee dembiilayaasha.
Waxa intaa dheer in sahan, kuwaas oo, telefoonada lagu duubay ay goob juqraafi dura joogta ah oo lagu hayaa diiwaanka lo of call iyo qoraalka Meta-data. All of ururinta xogta this, gaar ahaan xog ururinta ee dadban, kicisaa qaar ka mid ah su'aalo anshaxa, laakiin design Sugie ayaa iyaga si fiican u maareeyay. Sugie ka qaybgale kasta helay oggolaansho la wargeliyey macno ururinta xogta this, isticmaali ilaalinta ammaanka ku haboon, iyo karti ka qaybgalayaasha in ay dami raadraaca juqraafi. Dheeraad ah, si loo yareeyo halista siidaynta qasbay xogta (tusaale ahaan, subpoena ka booliska), Sugie helay Certificate of Qarsoodi oo ka socda dawladda federaalka hor kasta oo macluumaadka la ururiyey (Beskow, Dame, and Costello 2008; Wolf et al. 2012) . nidaamka Sugie ayaa dib loo eego by a-dhinac saddexaad (Guddiga Dib-Institutional iyada jaamacadda ee), oo waxay tageen meel ka durugsan waxa loo baahan yahay by xeerarka jira. Sida oo kale, waxaan qabaa shaqada bixisaa model qaali ah oo cilmi qaabili caqabadahan isku mid ah; arki Sugie (2014) iyo Sugie (2016) si looga doodo faahfaahsan oo dheeraad ah.
Awoodda in ay ka aamin iyo qaban shaqo deggan waxay muhiim u tahay geedi-habeeynta guul. Si kastaba ha ahaatee, Sugie helay in waayo-aragnimada shaqada ka qaybgalayaasha iyada 'ahaayeen rasmi, ku meel gaar ah, oo goosgoos ah. Dheeraad ah, gudahood iyada pool qaybgale, waxaa jiray afar qaababka kala duwan: "Ka bixitaan hore" (kuwa bilaabi raadinaya shaqo laakiin markaas hoos u soo baxay suuqa shaqada), "search joogto ah" (kuwa ku bixiya wax badan xilliga raadinaya shaqo) , "shaqo noqnoqda" (kuwa ku bixiya inta badan muddada la shaqeeyo), iyo "wax ka qabashada hoos u" (kuwa aadan ka jawaabin sahan si joogto ah). Dheeraad ah, Sugie doonayay in badan oo ku saabsan dadka ay joojiyaan raadinaya shaqo fahmaan. Mid ka mid macquul ah waa in goobayaasha noqda niyad iyo niyadjab iyo ugu danbeyn soo daadiyaa ka mid ah suuqa shaqada. Ogyahay macquul this, Sugie isticmaalo sahan iyada si ay u ururiyaan xogta ku saabsan gobolka dareen ka qaybgalayaasha, oo waxay heleen in "Ka bixitaan hore" group ma sheegaan heerarka sare ee walaaca ama faraxsaneyn. Saas ma aha, soo horjeeda ahaa kiiska: kuwa sii waday in ay raadiso shaqo sheegay dareenkooda badan oo cidhiidhi ku dareen. All of ganaax-grained this, si faahfaahsan gaadhya ku saabsan dhaqanka iyo xaaladda dareen ah ex-dembiilayaasha muhiim u ah fahamka caqabadaha ay la kulmaan iyo qaboojiyo ay kala guurka dib bulshada. Dheeraad ah, oo dhan of this si faahfaahsan ganaax-grained ayaa seegay lahaa in baadhitaan caadi ah.
Waxaa jira saddex casharada guud shaqada ka Sugie ee. First, habab cusub oo ay ku weydiinaya si buuxda la socon hab dhaqameed of sampling, yeeran, in Sugie qaaday muunad ixtimaalka caadiga ah ka dadka a jir si wanaagsan u qeexan. Second, ee hirka sare, cabbirka gaadhya waxay noqon karaan si gaar ah muhiim u ah barashada waayo-aragnimada bulshada in ay yihiin aan joogto ahayn oo firfircoon. Saddexaad, markii baadhitaan xog ururinta lagu daro raad digital, arrimaha anshaxa dheeraad kici karaan. Waxaan daweeyo doonaa anshaxa cilmi baarista si faahfaahsan cutubka 6, laakiin shaqada Sugie ayaa muujinaysa, in arimahan waa addressable cilmi ogsoon yahay lagana fekeray.